KAOMININA ANTANANARIVO: Misy miketrika grevy noho ny resaka politika – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 11:45
Tsy vao sambany no nisy ny disadisa teo amin'ny mpanolontsain'ny Tanàna sy ny Mpanatanteraka.
Accueil/Politika/KAOMININA ANTANANARIVO: Misy miketrika grevy noho ny resaka politika
Nafanafana tato ato ny fifanandrinana teo amin’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo sy ireo mpanolotsain’ny tanàna vitsivitsy manohitra ny fomba fitantanana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Vao tsy ela fa ny faran’ny herinandro teo no niteraka resabe ny mahakasika ilay tetibolan’ny Kaominina izay voalaza fa napetraky ny ben’ny tanàna ankehitriny. Namaly izany, sy ireo tsikera rehetra momba azy ny Ben’ny tanàna omaly. Fotoana izay nanambarany fa antony ara-politika avokoa no mahatonga ireny, ary misy mihitsy miketrika grevy noho izay antony izay…
Lucien R. 8 septembre 2020
“Tatoato dia hitantsika fa misy ireo mitsikera, ary tsy misy antony afatsy politika”, hoy ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra, omaly, nandritra ny kabary fanombohana ny herinandro.
Ity tompon’andraikitra ity izay namaly ireo tsikera rehetra mahakasika azy sy ny fitantanana ny Kaominina amin’ny ankapobeny. Raharaha nafana maromaro tokoa mantsy no nanenjehanan’Andriatsitohaina Naina tato ato. Nanomboka tamin’ny raharaha Mbs izany, teo koa ny tanin’ny Kaominina etsy Ambohimahitsy, ny resaka esplanade, sy ny sisa. Ny faran’ny herinandro teo, ny tetibolan’ny kaominina indray no niteraka resabe tao amin’ny tambazotran-tserasera. Resaka izay manambara fa nitondran’ny Ben’ny tanàna ankehitriny fanitsiana ny tetibolan’ny kaominina, ka nampitomboina avokoa ireo hetra alohan’ny vahoaka, indrindra amin’ny resaka asa fanarenana toy ny fanamboarana sy fandokona trano, olona hiteraka, sy ny sisa. “Raha tetibola no resahina, marina fa nifantoka mafy tamin’ny tetikasa isika. Tsy nandinika tsara ny fidiram-bola sy ny fiantraikany amin’ny fiainan’ny mponina », hoy ny fanazavany. Nolazainy, noho izany, fa amin’ny faran’ny volana septambra izao no hivory ny Filankevitra monisipaly. Izany no hahafahana mifanakalo hevitra sy mampifanaraka ny tetibola araka ny fasahiranan’ny mponina. “Mila mitady hevitra isika manasaraka ny hetra mikasika ny orinasa lehibe sy ny mponina izay marefo”, hoy ny ben’ny tanàna. Nohamafisiny, fa tsy mpitantana ankehitriny no namorona ireo fepetra ireo, fa efa ny fanatsarana no hatao.
Ny sasantsasany amin’ny mpanolotsain’ny tanàna no mametraka olana hatrany amin’ny fitantanana ny tanàna ankehitriny.
Manomboka misy vokatra ny asa
Niantso ireo mpiara-miasa rehetra aminy ny Ben’ny Tanàna hanohy sy hanamafy ny ezaka rehetra mba hahatanteraka haingana ireo tetikasa. “Henoko mihitsy aza fa misy olom-bitsy ato amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra no miketrika grevy. Nefa tsy manana antony mazava, fa mbola resaka politika hatrany”, hoy izy nanazava. Eo anatrehan’izany, nilaza ny tompon’andraikitra fa efa manomboka misy vokatra ny asa amin’ny fanarenana ny Kaominina, sy ireo fanadihadiana samihafa mikasika ny fitantanana. Izany indrindra no nampahatahotra ireo mpanao politika sasantsasany ka mahatonga ny fikomiana amin’ny mpitantana ny tanàna. “Tsy mila resaka sy adilahy politika intsony izao ny vahoaka. Fa mila asa, mila vokatra. Koa aoka isika samy hifantoka tanteraka amin’ny asa sy andraikitra tandrify azy. Matoky antsika tsirairay aho ary mahatoky fa tsy maintsy tratra ireo tanjona ho an’Antananarivo Tanànantsika”, hoy Andriatsitohaina Naina.
FANAMPIANA NY ANY ATSIMO: “Tsy misy distrika adino”, hoy ny tale jeneralin’ny BNGRC
FIAKARAN’NY ANTONTANISA COVID-19: Misy fepetra manokana raisin’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka